Ugcino lweeNkcukacha zeDola yaseMelika-Funda ukuRhweba
tag: Isalathiso seDollar yaseMelika
Idola yaseMelika ihlala iphantsi koxinzelelo
I-USD iqokelele i-0.60% kwasekuqaleni kwase-Asiya- urhwebo kwaseYurophu ngaphambi kokuba isilele ukulandela ngaphezulu kwaye yehle kwangoko emva kokuphinda kuvulwe ngoLwesithathu. Ukuthetha ngokusisiseko sill sill kakhulu bearish apha kwaye inqanaba elilandelayo ley yi-90.375 eyi-Februwari-Matshi 2018 kwinqanaba eliphambili lokumelana.
Nje ukuba eli nqanaba liphule umva ngo-2018 i-DXY yahlanganisa i-13.7% malunga neminyaka emi-2 ke eli linqanaba ekufuneka ulikhangele. Ukuba eli nqanaba liphule inqanaba elilandelayo ngama-89.50
Ngaba ufuna ukuthengisa i-USD kunye neQela le-VIP? Bhalisa namhlanje ukuze ufumane ZONKE iimpawu zethu
tags Isalathiso seDollar yaseMelika
Ukuqwalaselwa kweenguqu kwiYen Ukulandela ukuRhoxiswa kweDola ngenxa yokuThintela umngcipheko
Ukuhlaziywa: 25 Septemba 2020
Idola kunye neYen babuyela umva kancinci namhlanje. Ukuthintela umngcipheko kuyahla kancinci. Kodwa njengoko iimarike zaseAsia zisokola ukufumana amandla okubuyela kwimeko yesiqhelo, umngcipheko wokuthintela umngcipheko unokubuya nangaliphi na ixesha phambi kokuphela kweveki. Ngokumalunga neveki, idola ihlala inamandla, ilandelwa yi-yen. Idola yase-Australia iqhuba kakubi kakhulu, ilandelwa yidola yaseNew Zealand.
Ngokobuchwephesha, idola ilahlekelwa kukukhula okuthile kwangaphakathi. Nokuba igolide ibonakala ngathi ilungele ukudityaniswa. Kodwa umbuzo ngowokuba ingaba iYen inokubuyela umva tandem. Ngenye indlela, itotshi iya kudluliselwa kwi-Yen ukuze ixabise ngokuchasene nezinye iimali eziphambili. Inkxaso encinci kwi-104.85 kwi-USD / JPY iya kuba kwinqanaba lokubukela. Ikhefu kwesi sikhundla linokuhamba kunye nokwehla okuhlaziyiweyo kweminye iminqamlezo ye-yen enje nge-EUR / JPY kunye ne-GBP / JPY.
Bambalwa abaya kuphendula ekukhuleni okubuthathaka kunokulindelweyo kwiiodolo zeempahla ezizinzileyo. I-euro okwangoku yeyona ibuthathaka ukuza kuthi ga ngoku, ilandelwa yiifranc zaseOstreliya nezaseSwitzerland. Ngokubanzi, uluvo lwabathathi-nxaxheba beemarike luye lwasilela, kodwa okwangoku akukho ntengiso yongezelelweyo.
Ii-Orders zeMpahla eziHlawulelwayo zase-US zakha iRose 0.4%, iiOrd zokuThutha ngaphandle zeRose 0.4%
Ingxelo yeeodolo zeempahla ezizinzileyo ezikhutshwe ngolwesiHlanu ibonise ukonyuka kwe-0.4%, ngaphantsi kokulindelweyo. Ii-odolo zeempahla ezizinzileyo e-US zaphakama nge-0.4% MoM ngo-Agasti ukuya kwi- $ 232.8 yezigidigidi, i-1.2% ye-MoM ngaphantsi kokulindelweyo.
Nangona kunjalo, yayiyinyanga yesine ngokulandelelana kokukhula. Ii-odolo zezothutho ngaphandle kwempahla ezithunyelwa ngaphandle zikhule nge-0.4% MoM, ethe yawa phantsi kulindelo nge-1.2% MoM. Ngaphandle kokuzikhusela, ii-odolo zonyuswe nge-0.7% MoM. Oomatshini babonise ukwanda nge-1%. 5% m / m.
Ukuwa kwemfuno ngokuyinxenye kungenxa yokwehla kwe-4.0% kwintengiso yezithuthi, njengoko ibango elimiselweyo ngenxa yokuma libonisa iimpawu zokudinwa. Ukukhula kwee-odolo eziphambili kuphakamisa ukuba, nangona kuyacotha, ukubuyiselwa kotyalo-mali lwenkunzi akuyeki, kodwa kuqala kwiindawo ezilungileyo. Isalathiso sedola yaseMelika khange siphendule kula manani kwaye kutsha nje sifumene i-0.23% ngosuku ukuya ku-94.55.
tags Iimpahla ezihlala ixesha elide, KwiDola yaseMelika, Isalathiso seDollar yaseMelika, yen